यसरी खिचिएको थियो ‘वन सट’ फिल्म जालो, शुक्रबारदेखि रिलिज ! – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » यसरी खिचिएको थियो ‘वन सट’ फिल्म जालो, शुक्रबारदेखि रिलिज !
यसरी खिचिएको थियो ‘वन सट’ फिल्म जालो, शुक्रबारदेखि रिलिज !
पोखरा, १७ जेठ । एउटै ‘सट’मा दुईवटा फिचर फिल्म । यो एउटा ईतिहास हो । र, यो ईतिहास नेपाली फिल्म उद्योगले रचेको छ । एकै ‘सट’मा खिचिएको ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ मध्ये यसको पहिलो ‘सिरिज’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुँदैछ । फिल्म रिलिज भएसँगै नेपाली फिल्म उद्योगमार्फत बनेको यो फिल्मले ‘गिनिज बुक्स’मा आफ्नो रेकर्ड राख्नेछ ।
त्यसो त भारतीय सिनेमा उद्योगमा ‘वन सट’मा लामो फिल्म बनाएको रेकर्ड छ । सबैभन्दा लामो वन सट सिनेमाको रेकर्डमा हालसम्म ३ घण्टा २८ मिनेट लामो सिनेमा गिनिजको रेकर्डमा छ । यद्यपी ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ गरि एउटै सटमा ४ घण्टा लामो फिल्म खिचेर नेपाली फिल्म उद्योगले यो रेकर्ड आफ्नो पोल्टामा पार्ने अन्तिम पर्खाईमा छ ।
यो फिल्मलाई निर्माता मोहित मुनालले निर्माण गरेका हुन् भने अराज केशव गिरी निर्देशक हुन् । फिल्मलाई हरि घले लामाले खिचेका हुन् । र, ४ घण्टामा २ वटा फिल्मलाई ‘वन सट’मा तयार गर्न पनि यी तीन जनाकै सबैभन्दा ठुलो हात छ । ‘निर्देशकको खुबी र छायाँकारको आँट बिना यो फिल्म सम्भव थिएन ।’ निर्माता मोहित मुनाल सम्झन्छन्–‘शुरु शुरुमा त कसैले पत्याएका थिएनन् । सबैले यीनीहरु पागल हुन लागे भन्थे । तर हाम्रो टिमको अथक प्रयास पछि यो सम्भव भयो ।’
अहिले फिल्म पुरै तयार भैसकेको छ । कतिपय फिल्मकर्मी र केहि कलेजका विद्यार्थीहरुलाई ‘ट्रायल शो’ पनि निर्माण टोलीले गरिसकेको छ । र, सबैले उत्कृष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएपछि निर्माण यूनिट अझै बढि हौसिएको छ । ‘दर्शकबाट पनि हामीले त्यस्तै अपेक्षा गरेका छौँ ।’ पोखरा आएका निर्माता मुनालले भने–‘पक्कै पनि हाम्रो प्रयास खेर जाने छैन ।’ निर्माता मुनाल ‘जालो’ फिल्म एउटा ऐतिहासिक फिल्म भएकोले दर्शकलाई यस्तो मौका नछुटाउन आग्रह समेत गर्छन् ।
जेठ १९ गतेदेखि नेपालभरको हलहरुमा प्रदर्शन हुने फिल्मको कथावस्तुले तानेकै भरमा आफुले लगानी गर्न कस्सिएको मुनाल बताउँछन् । ‘शुरुमा निर्देशक अराज केशबले एउटा गज्जबको कथा लिएर आए । र, त्यसैलाई वन सटमा फिल्म बनाउने बताए ।’ मुनालले भने–‘त्यो कथा मलाई उत्कृष्ट लाग्यो अनि आइडिया पनि । त्यसैले मैले यसमा लगानी गरेको हुँ ।’
खासमा शुरुमा यो फिल्म गिनिज रेकर्ड भन्दा पनि एउटा प्रयोगका लागि गर्न लागेको उनले सुनाए । यद्यपी कथाअनुसार फिल्मको ‘लेन्थ’ बढ्ने देखिएपछि बल्ल गिनिज रेकर्डको अवधारणा आयो । ‘अनि बल्ल हामीले गुगल गर्न लाग्यौँ ।’ उनले भने–‘त्यसपछि भारतीय सिनेमाको रेकर्ड देख्यौँ । र, हामीले त्यसको रेकर्ड बे्रक गर्ने अठोट लियौँ ।’
निर्माता मुनाल आफुले आफ्नो लागि मात्र नभई देशको लागि फिल्म बनाएको तर्क गर्छन् । ‘गिनिज रेकर्डसँगै यो फिल्म विश्वका विभिन्न फेस्टिभलहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुँदैछ । र, सम्पूर्ण विश्वले नेपाली फिल्म उद्योगको बारेमा जानकारी पाउनेछन् ।’ उनी भन्छन्–‘यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल र नेपाली फिल्म उद्योगलाई विश्वस्तरमा पु¥याउनेछ ।’
फिल्म एउटै सटमा खिचिएको भएपनि यसमा धेरै लोकेशनहरु रहेको निर्माताले खुलाए । साथै उनले फिल्म तयार गर्नलाई साथ दिएका सम्पूर्ण टेक्निसियन, कलाकारसहितको निर्माण यूनिटलाई धन्यबाद समेत दिएका छन् । ‘सबैको साथले मात्र यो कुरा सम्भव भएको हो । र, यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।’
फिल्ममा अनुपविक्रम शाहि, मेनुका प्रधान, रेमनदास श्रेष्ठ, निराजन प्रधान, मुना गौचन, निर शाह, लक्ष्मी गिरी, भिष्म जोशि, प्रकाश श्रेष्ठ, मुक्तराम आचार्य, लक्ष्मी वर्देवा लगाएतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । यो फिल्मका लागि सम्पूर्ण कलाकारहरुले १७ दिनसम्म निरन्तर रिहर्सल गरेका थिए । शुरु शुरुमा कलाकारले समेत वन सट फिल्म तयार हुने कुरामा शंका गर्ने गरेको निर्माता मोहित मुनालले खुलासा गरेका छन् । तर फिल्म हेरिसकेपछि सम्पूर्ण कलाकारहरु दंग परेको उनले सुनाए ।